Global Voices teny Malagasy » Krismasy Nilahatra Solitany Noho ny Tsy Fisiany Tao Nizeria · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Desambra 2017 14:33 GMT 1	 · Mpanoratra Eta Uso Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Mainty, Nizeria, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna, Tsidika, Voina
Nandany ora maromaro tao anatin'ny fiaran'izy ireo ny Nizeriana, nihitsoka teny an-dalana ary tsy afaka nody tany an-tanindrazany hankalaza ny Krismasy  satria niharan'ny tsy fahampian-tsolika goavana ny mpamokatra solika lehibe indrindra aty Afrika.
Ho an'ny sasany, naharitra hatramin'ny maraimben'ny 25 Desambra ny fiandrasana satria mpamily an'arivony  no nilahatra tao amin'ny tobin-dasantsy nanantena hody ara-potoana mba hankalaza ny noely . Nampiato ny asany ho an'ny taona mihitsy aza ireo orinasam-pitaterana sasany, raha nampiakatra ny saran-dalana hatramin'ny 300% kosa ny hafa. Loharanon'ny fahasorenana ao amin'ny firenena izay manana fomban-drazana mafonja amin'ny fiarahana amin'ny fianakaviana amin'ny Krismasy izany.
Niresaka am-pahibemaso voalohany momba ny tsy fahampian-tsolika goavana naharitra telo herinandro  taorian'ny nanombohany, nilaza  ny filoha Nizeriana Muhammadu Buhari hoe:
Any amin'ny tsirairay izay mitolona mba hahita ireo namany sy fianakaviany mandritra ity fotoana fankalazana ity noho ny #tsy fisian'ny solitany  ny tenako ary matoky aho fa rehefa miray hina isika amin'ny maha firenena iray antsika, dia afaka mahita vahaolana amin'ity krizy ity.
TSIKARITRA: namoaka Hafatra Krismasy ho an'ny Nizeriana vao omaly i @MBuhari  ary tsy nilaza ny tsy fisian'ny solika mahatezitra tokoa. Inona no niova tampoka teo anelanelan'ny teo sy ny amin'izao fotoana izao?
FANONTANIANA: Raha tsy nisioka momba izany i @atiku  androany maraina, moa niresaka momba izany ve i Buhari androany?
Ao anatin'ny krizy, nanaporofo ny mponina sasany ao Nizeria, toerana iray voalaza fa be fanantenana indrindra eto an-tany , fa fantatr'izy ireo ny ny fomba hijanonana ho faly. Mpisera Twitter Jude kosa nizara ity avy ao amin'ny tobin-tsolika ao Lere, tanàna iray ao amin'ny firenena avaratr'i Nizeria:
Tsy miraharaha ny tsy fisian'ny solitany #FuelScarcity #EndSARS  ny filoha @MBuhari  ary mitomany ireo izay nifidy azy. Tsy mba nisahirana akory nanazava ny anton'izao zava-mitranga ankehitriny izao akory ity lehilahy ity izay mahafantatra tsara ny vola very amin'ny filaharana solitany noharina tamin'ny resaka ora fiasàna, taona vitsivitsy lasa izay!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/12/28/112824/
 mpamily an'arivony: http://saharareporters.com/2017/12/23/two-days-christmas-fuel-scarcity-worsens-across-nigeria
 hankalaza ny noely: http://www.africanews.com/2017/12/23/anger-as-nigeria-angola-face-fuel-shortages-ahead-of-christmas//
 nampiakatra ny saran-dalana hatramin'ny 300% : https://guardian.ng/news/holidaymakers-groan-as-petrol-hits-n500-litre-in-black-market/
 telo herinandro: https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/253453-buhari-speaks-fuel-scarcity.html
 be fanantenana indrindra eto an-tany: https://www.theguardian.com/global/2011/jan/04/nigerians-top-optimism-poll